Mpianatra iray nahazo ny tiana hambara
Niverina tany Jerosalema i Jesôsy sy ny mpianany. Tahaka an'i Jaona mpanao batisa izay nanahiran-tsaina an'i Herôda, dia tsy nampandry mandry ny manam-pahefana (ao anatin'izany i Heroda) ihany koa i Jesôsy . Anisan'ireo mpanara-dia an'i Jesôsy ny mahantra sy ny olona marefo izay niandrandra mafy ny fanampiana avy Aminy.
Nirin'i Jesôsy mihoatra noho ny zavatra rehetra ny hitondra fanantenana ho an'izao tontolo izao. Kanefa azony antoka izao fa hanao izay azony atao ireo olona manana hery sy fahefana ambony mba hisakana ny asa nanirahana Azy. Tsy sitrak'izy ireo ny hahombiazan'i Jesôsy.
Ireo mpianatr'i Jesôsy roa ambin'ny folo lahy kosa, dia hita ho naniry mafy hiandany amin'i Jesôsy kanefa toa very hevitra - na jamba. Ao amin'ny Marka 8:31-33 ohatra, dia niezaka ilay Mpampianatra lehibe nanazava zavatra saro-takarina ho an'ny mpianany. Izany hoe, mbola jamba ara-panahy amin'ny lafiny maro izay tena manan-danja izy ireo (Mar. 8:37).
Toy izany no nitranga taloha kelin'ny nihaonan'i Jesôsy tamin'ny olona iray izay nahiratra ka nahatakatra ny tiany hambara.
Vakio ny tantaran'ny nanasitranan'i Jesôsy an'i Bartimeo, ilay mpangataka jamba (jereo ny Mar. 10:46-52). Mariho ny famindrampo lehibe nasehon'i Jesôsy azy. Jereo koa fa ny fanirian'ilay jamba fahiratana no nahatonga azy nanapa-kevitra hanaraka an'i Jesôsy teny an-dalana ho any Jerosalema. Araka ny hevitrao, miezaka ny haneho ny maha-samy hafa an'i Bartimeo sy ireo mpianatr'i Jesôsy hafa ve i Marka eto? Ahoana no itondran'io tantara io fanazavana ho anao mikasika ny hevitr'izany hoe mamaly ny antson'llay Mpampianatra lehibe?
Naniry hahita ny volo oliolin'ny zazakely i Bartimeo, ary koa ny lokon'ny vary amin'ny fotoam-pijinjana. Tsy ara-batana ihany anefa ny fahiratana fa ara-panahy koa. Mikasika ny fahatakaran'ny saina izany dia fahafantarana tsara hoe iza marina moa Ilay Mpampianatra lehibe. Zavatra iray manan-danja ny fahiratan'ny maso, ary fantatr'i Jesôsy izany. Kanefa fantatr'i Jesôsy koa fa ny tena faniriana lalina ao anatin'ny olona dia ny hanana fiainana vaovao sy tsara lavitra.
Vakio ny Heb.5:12-14. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo antsika mikasika ny tena fanabeazana marina?